Akara agba nke Web | Martech Zone
Bọchị Sọnde, Machị 25, 2012 Douglas Karr
Anyị edeela tupu agba nwere ike imetụta zuo omume. Nyere na ozi, ọ bụ ihe na-akpali mmasị ịhụ otú ụlọ ọrụ logos leverage agba. Weebụ jupụtara na logos nke kachasị acha anụnụ anụnụ, na -emepụta echiche nke ntụkwasị obi na nchekwa, yana uhie, na-eme ka e nwee ume na ịdị ngwa! Ihe omuma a site na Ndị na-acha akwụkwọ ndụ na-egosi na ọtụtụ ụdị ihe ịga nke ọma na ịntanetị nwere ụfọdụ agba jikọtara na akara ngosi ha!
Tags: acha anụnụ anụnụagbagreenlogosredodo
Onye Na-aza Nyocha Gị? Nkwado Mere Mfe
Nke ahụ dị mma. M maara na-acha uhie uhie bụ ewu ewu, ma ọ dịghị mgbe ọ ghọtara otú ọtụtụ logos ji acha anụnụ anụnụ. Eji m agba ocha na aja aja, ugbu a na-eji odo na oji na logo m. Eleghi anya m kwesiri iji uhie na acha anụnụ anụnụ! Daalụ maka ịkekọrịta Doug a. Nke ahụ tọrọ ụtọ!
Apr 17, 2012 na 8: 50 AM
Ezubere akara ngosi a ka ọ bụrụ akara ka ọ na-eji nkụja na-acha anụnụ anụnụ, oroma maka nlebara anya, ume na obi ụtọ, na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ maka ịdị jụụ, ịchekwa / itinye ego. Ọ na-arụ ọrụ. Ndị mmadụ na-echekwa nnukwu ego maka azụmahịa ha mgbe ha na-anata mbipụta dị elu maka mkpa ahịa ha.